Home News Ciidamada Dowladda iyo ajaaniib oo howlgalo ka sameynaya Gobolka Sh/hoose
Ciidamada Dowladda iyo ajaaniib oo howlgalo ka sameynaya Gobolka Sh/hoose
Ciidamada Amaanka ee ayaa howgalo ka dhan ah dagaalamayasha Al-Shabaab waxaa ay ka wadaan deegaano ka tirsan gobalka Shabeelaha hoose.
Deegaanadaay howlgalada ka socdaan ayaa waxaa ka mid ah duleedka Magaalada marka ee Gobalka Shabeelaha hoose.
Dhaq-dhaqaqyada military ayaa ka dambeeyay kadib markii maalmihii dambe ay Al-Shabaab iyo Ciidamada xoogga ay ku dagaalamayeen deegaanada Gandarshe iyo Jilib marka ee Gobalka Shabeelaha Hoose.
Dadaka deegaanka ayaa warbaahinta u sheegay in Deegaanada badan al-Shabaab laga saaray, islamarkaana ciidamada xoogga ay joogaan.
Previous articleCaruur iyo Haween ku sumoobay Gobolka Sool
Next articleDowlada Fedaraalka oo dardar galisay burburka dowlad Goboleedyada
Guddoomiye kuxigeenka Gobolka Baay oo ka digay in qalalaaso Siyaasadeed ay...
C/wali muudeey Mooshinka ka dhanka ah oo Cirka isku shareeray (Faah-faahin)